Arteta oo sharaxay sababtii ay Arsenal guuldarrada kala kulantay Liverpool kulankii xalay ee tartanka Carabao Cup – Gool FM
(London) 21 Jan 2022. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay kaddib markii Gunners ay guuldarro kala kulantay Liverpool kulankii lugta labaad wareegga afar-dhammaadka ee tartanka Carabao Cup.
Kulanka intuu socday ayaa lagu arkay daqiiqadii 90-aad marka ay ciyaarta mareysay in kooxda Arsenal ay noqotay 10 xiddig kaddib markii uu kaarka roosaha ka qaatay laacibkooda khadkad dhexe ee Thomas Partey.
Haddaba shabakada BBC Sport ayaa baahisay wareysi uu bixiyay Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta kaddib ciyaarta waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Way adag tahay inaad ku guulaysato 10 ciyaartoy, waanu ku guuldaraysanay inaan gool dhalino.”
“Runtii aad ayaan u niyad jabnay, laakiin waxaan la ciyaarnay koox heer sare ah, waxaan helnay waqtiyo fiican oo labada qeybood ah, waxayna ahayd inaan gool dhalino.”
“Waxaan helnay fursado, laakiin waxay ahayd inaan u bedelno goolal si aan uga badino koox sida Liverpool oo kale ah.”
“Waxaan ku ciyaarnay seddexdii kulan ee ugu dambeysay toban ciyaaryahan, heerkan oo kale aad ayay u adag tahay in sidaan lagu guuleysto.”
Mikel Arteta oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sii raaciyay: “Waan ku faraxsanahay dhalinyarada iyo sida ay uga go’an tahay iyada oo aan wax tababar ah la sameynin.”